Rasaasa News – Dhimasho 75, Dagaal u Dhaxeeya Beelo Xadka Oromada iyo Somalida
Dhimasho 75, Dagaal u Dhaxeeya Beelo Xadka Oromada iyo Somalida
on March 1, 2012 12:14 pm
Jijiga, Mar 01, 2012 [ras] – Wararka ka imanaya degmada Raaso ee degaanka Somalida ayaa sheegay in shalay aroortii uu dagaal ka dhex qarxay labo beelood oo Somali ah, meel 30 Km u jirta degmada Raaso.
Sababta dagaalka keentay ayaa lagu sheegay in beel Somali ah oo sheeganaysa magaca qoomiyada Oromada ay weerar ku soo qaaday beesha Somalida ah ee degan degaanka Raaso.
Khasaaraha dhimashada ka dhashay dagaalka ayaa la sheegay in tiradu ay kor u dhaaftay 75, dhinaca Somalida 27 dhimasho ah, dhanka Oromada 48 dhimasho ah.
Ciidamada degaanka Somalida Ethiopia iyo ciidamo degaanka Oromada ayaa kala dhex galay dagaalka labada beelood dhaawacyadii ka dhashayna waxaa la kala geeyey Jijiga iyo Baale.
Beesha Sheekhaal Loobagay ayaa ka soo hayaantay koonfurta Somaliya dagaaladii sokeeye ee dalka Somaliya iyada oo magac marti ugu ahayd beesha Sheekhaash reer aw Qudub oo iyadu degan degaanka Somalida Ethiopia.
Beesha Sheekhaal Loobagay ayaa tan iyo intii ay soo gashay degaanka Somalida Ethiopia xasarad ka waday degmooyinka qaar, iyada oo degmada Raasa ka abuurtay khilaaf qabiil iyo colaad ururo diimeedyo.
Beesha Sheekhaal Loobagay ayaa ku doodaysa in ay asal ahaan tahay Oromo iyada oo doonaysa in degmooyin ka mid degaanka Somalida la raaciyo qoomiyada Oromada. Arinkaas oo ay beesha Sheekhaash reer aw Qudub diiday in ay Oromo tahay, arintaas waxaa ka dhashay dagaalo ay ka mid yihiin kuwa shalay dhacay.
“Salaada aan dayno, Maaraha aan Sifayno, Subeerka Coloobay Sidiisa aan yeelo” Xuliye 1960